30 Ebe Nlekọta Ihe Niile Kachasị Mma na Ski na United States maka ndị di na nwunye
By Victoria Akpan TMLT September 16, 2021 Family, si ebi ndụ, Travel 0 Comments
- Ebe ntụrụndụ dị gị nso -
Na -achọ njem ga -enyere gị aka ịchekwa ego ebe ị ka na -enye gị ohere izu ike ma kporie ndụ? N'ebe ntụrụndụ kacha mma nke America niile, ị nwere ike mee nke ahụ, yana ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ebe obibi ndị a zuru oke na-enye ndị njem nleta ihe niile site na ime ụlọ elu mara mma ruo nri okpokoro na tebụl dị mma na ihe omume ị ga-achọ ime, ugboro ugboro, na-eme ha dị mma maka ezinụlọ, di na nwunye, ma ọ bụ ndị na -alụbeghị di na -agbalị ime ka ahụike ha ka mma.
Nhọrọ anyị gụnyere ihe ọ bụla site na adịchaghị mma, ebe ntụrụndụ okomoko yana ihe ndozi niile ka ọ bụrụ ebe obibi mara mma n'ime ụlọ osisi na Ulo oru udiri bed na nri ụtụtụ.
N'ime ndepụta anyị, ị ga -ahụ ụlọ ndị dị n'ụsọ osimiri, mgbada ugwu, na ọbụna ebe anụ ụlọ.
Ụlọ oriri na ọlusiveụlusiveụ kachasị mma na United States
Ebe ntụrụndụ niile nke dị na United States dị iche iche dị ka ala obodo, sitere na ebe ntụrụndụ ebe okpomọkụ nwere ọnụ ahịa ọnụ ahịa niile ruo n'ọhịa mara mma, ụlọ oriri na nkwari akụ Victoria, na ebe obibi ugwu.
Ndị na -esonụ bụ ndepụta ebe ntụrụndụ iri na United States nke bụ ma mkpokọta ma ọ bụ nye ngwugwu pụrụ iche na nkwalite nke nwere ọtụtụ ihe eji achọta na ebe ntụrụndụ niile.
1. Bungalows Key Largo na Key Largo, Florida
Oge ezumike ịhụnanya kacha dị na ndị okenye a bụ naanị ụlọ ezumike niile na Florida. Veranda nkeonwe nwere mmiri ịsa mmiri, tebụl smart smart ihuenyo, yana akwa dị mma nke nwere matarasị ohiri isi na-esonye na bungalow ọ bụla sara mbara.
Were klaasị yoga n'ụsọ osimiri, see n'elu mmiri n'ụgbọ mmiri tiki nkeonwe, ma ọ bụ rie nri n'otu n'ime ụlọ nri isii dị na saịtị.
Ndị ọbịa ga-eji ịnyịnya ígwè mee ihe, yana nkuzi yoga otu ụbọchị kwa ụbọchị, ọdọ mmiri dị iche iche na Jacuzzis, yana spa dị na saịtị (ọnụ ahịa ọgwụgwọ ka agbakwunyere).
2. Vista Verde Guest Ranch na Clark, Colorado
Ọbịa na Vista Verde Guest Ranch nwere ike ibi ndụ ime obodo ebe ọ ka na -ekpori ndụ okomoko dị ịtụnanya. Ebe nchekwa anụ ụlọ a enweghị ekwentị, TV, ma ọ bụ ịntanetị n'ime ụlọ ndị ọbịa, na -enye ndị ọbịa ohere ịpụ.
Ebe igwu mmiri, mpaghara ebe ezumike nwere echiche panoramic, ebe mgbatị ahụ, ogige ịnya ụgbọ ala, na ngalaba ụmụaka nwere eriri ụdọ so na ihe eji enyere ndụ aka.
3. Woodloch Pines Resort dị na Hawley, Pennsylvania
Ebe ezumike ezinụlọ a na-anabata ndị ọbịa nnabata na-ekpo ọkụ na nke enyi na ọtụtụ ohere ị ga-enwekọ ihe ọchị, nke merela ochie.
A ma ama ebe ntụrụndụ a maka mmemme mmemme sara mbara, nke na-enye ọtụtụ mmasị.
Egwuregwu golf na ebe egwuregwu klaasị ụwa dịkwa na Woodloch Pine Resort.
Ọdọ mmiri ime ụlọ na n'èzí, mgbidi ịrị ugwu, kayak, snowshoe, na ntụrụndụ abalị so na ihe eji enyere ndụ aka.
4. Lodge na Little St. Simons Island, Georgia
Ihe niile gụnyere Lodge na Little Saint Simons Island ezumike dị mma maka ndị na -achọ udo, ịnọpụrụ iche, na ịma mma.
O nwere ihe karịrị acres 11,000 na ihe karịrị kilomita asaa nke ụsọ mmiri nkeonwe, mana naanị mmadụ 32 ka enyere ohere ịnọ n'oge ọ bụla. Nke a bụ ezigbo ebe maka ndị mmadụ na -achọ nwayọ nwayọ, na ọgwụgwọ ahaziri iche na ikuku dị ụtọ.
Nri nke onye siri nri kwadebere na saịtị, njem ụgbọ mmiri na-aga ma na-esi n'àgwàetiti ahụ, na njem nlegharị anya nke ndị okike na-eme kwa ụbọchị dị.
5. Club Med Sandpiper Bay na Port St. Lucie, Florida
Ebe ezumike a, nke a maara dị ka otu n'ime ebe ntụrụndụ kacha mma na United States maka ezinụlọ na-arụ ọrụ, na-enye ntakịrị ihe niile.
Club Med Sandpiper Bay, dị ka ọtụtụ ebe ntụrụndụ Caribbean niile, na-enye ndị ọbịa ohere izu ike n'akụkụ ọdọ mmiri, sonye na mmemme mmiri, rie ma drinkụọ ihe ọ bụla masịrị ha.
Ụlọ egwuregwu na ndị nkuzi nwere ahụmihe, klọb ụmụaka, na ọdọ mmiri ndị dị n'èzí so n'ime ihe eji enyere ndụ aka.
6. Ebe a na -azụ anụ ụlọ White Stallion na Tucson, Arizona
Ebe a na -edebe anụ ụlọ White Stallion bụ ebe kacha mma ịnọ maka ezumike nke na -ewepụta ahụmịhe nke ọdịbendị ọdịda anyanwụ America.
A na-akọwakarị ụlọ nkwari akụ a dị ka obe n'etiti ebe a na-azụ anụ na ebe ezumike n'ihi na ọ na-enye ndị ọbịa ya ngwugwu.
Akụrụngwa gụnyere ọdọ mmiri kpụ ọkụ n'ọnụ na ebe ịsa ahụ ọkụ, ebe ntụrụndụ, spa, ntụrụndụ abalị, na kalenda ọrụ ụmụaka.
7. Skytop Lodge dị na Skytop, Pennsylvania
The Ụlọ Skytop, nke dị n'etiti Ugwu Poconos, na -ebuga ndị ọbịa gaa n'oge gara aga.
Ebe obibi ochie a, nke ewuru na 1928, na-enye ndị ọbịa ọnọdụ gburugburu ebe obibi, okomoko yana ịnweta mpaghara dịpụrụ adịpụ. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-eme na ụlọ 5,500 acre a.
Ụlọ oriri na ọ Spaụ Spaụ spa, ihe omume njem dịpụrụ adịpụ, na ahụmịhe iri nri dị mma so n'ihe eji enyere ndụ aka.
8. Miraval Arizona Resort & Spa na Tucson, Arizona
The Miraval Arizona Resort & Spa bụ saịtị kachasị maka ezumike ọdịmma, na -enwe nguzozi n'etiti nlele ugwu dị egwu na ịgwọ ikuku ọzara.
Ebe ezumike a dị mma maka ndị chọrọ oge naanị ha, ebe ọ na-enye ọnụahịa yana yana nhọrọ nke ọrụ spa na-enye ume ọhụrụ.
Ememe mmegharị ahụ, nlekọta ntutu, nlekọta anụ ahụ na ọgwụgwọ ịgwọ ume dị na spa a na-emeri.
Ihe niile gụnyere Kachemak Bay Wilderness Lodge's Gburugburu Alaskan bụ ihe mgbe ochie, mana ime ụlọ okomoko, nri na -atọ ụtọ, na ngwugwu ihe eji eme ihe bụ ihe ọ bụla.
Nri gourmet, ebe obibi okomoko na gburugburu ebe mara mma, na ahụmịhe okike na-eduzi n'otu n'otu bụ naanị ole na ole n'ime ihe eji enyere ndụ aka.
10. Grand Hotel dị na agwaetiti Mackinac, Michigan
Nnukwu ụlọ nkwari akụ ahụ, nke dị n'elu ugwu dị n'agwaetiti Mackinac mere ihe akụkọ, ebe anaghị anabata ụgbọ ala na ụgbọ ịnyịnya na-adọkpụ bụ ụzọ njem, bụ ezigbo mma America.
Ọ bụ ọmarịcha ebe nzuzo zuru oke nke juputara na akụkọ ihe mere eme yana ebe veranda kachasị ogologo n'ụwa.
Ime ụlọ a haziri ahazi, ọdọ mmiri dị n'èzí, ịgba egwu abalị, egwuregwu ahịhịa, na tii ehihie kwa ụbọchị so n'ihe ndị eji enyere ndụ aka.
10 Ebe ezumike kacha mma di na nwunye na United States
1. Ebe a na -eme Hallmark - Cannon Beach, Oregon
Hallmark Resort, otu n'ime ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ kacha nwee ịhụnanya na mba ahụ, dị na otu n'ime ọmarịcha oke osimiri dị na Northern Oregon, na -ele Oké Nkume Haystack a ma ama.
Ọ na -enye gị ohere iji mkpagharị mkpagharị na a nnukwu ụsọ osimiri nke jupụtara na aja aja na ebili mmiri dị ala, naanị ụkwụ site n'ọnụ ụzọ gị.
Chọpụta ọdọ mmiri mmiri doro anya nke juputara na ndụ mmiri mara mma dị ka starfish na crabs herb, ma lezie anya maka ịkwaga whale isi awọ site na Nọvemba ruo Jenụwarị na mbubreyo March ruo June.
Balconies nwere echiche nke Pacific, yana ọkụ ọkụ gas na tubs mmadụ abụọ, dị n'ime ụlọ.
2. Auberge du Soleil - Ndagwurugwu Napa, California
Ndagwurugwu Napa bụ a ebe a na -ewu ewu maka ezumike, mana di na nwunye ọ bụla na -achọ ezumike ịhụnanya ga -ahụ ya n'anya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha nọrọ na Auberge du Soleil.
Ebe obibi dị na ebe a mara mma, nke dị n'etiti osisi oak na osisi oliv, nwere echiche na -enweghị atụ banyere ubi vaịn na Ugwu Mayacamas.
Ọ bụ ebe na -ekpo ọkụ maka ndị lụrụ di na nwunye, ọ bụkwa mara maka nri obodo mmanya ya, ekele maka na ọ bụ ụlọ oriri na ọ Frenchụ Frenchụ French nke Michelin nwere nwere ya.
Na saịtị, enwere okpuru ụlọ karama 15,000, yana ebe a na-ere kọfị na mmanya maka nri na-atọ ụtọ karịa na ọdịda anyanwụ.
3. Udo dị n'ụsọ osimiri Beach Beach - Marathon, Florida
O siri ike ịgabiga ebe a maka ndị di na nwunye na -achọ okomoko, ịnọ naanị ha, na echiche panoramic nke Ọwara Oké Osimiri Mexico.
Na Igodo Marathon, ọ bụ otu n'ime ebe ntụrụndụ kacha elu na Florida Keys, na-enye ụlọ na ụdị ụdị Victoria na-ekpo ọkụ nke ekewara n'ime ụlọ nwere okpukpu abụọ na ime ụlọ atọ.
Ha niile gụnyere kichin gourmet nke ọma, yana ọnụ ụzọ French na ọkwa abụọ na -eduga na mbara ihu sara mbara nke nwere ọmarịcha Ọwara Oké Osimiri Mexico.
Ọmarịcha osimiri nkeonwe mara mma, ọdụ ụgbọ mmiri nke nwere njem nlegharị anya ụgbọ mmiri, ụlọ mmanya tiki nke dị n'oké osimiri, ọdọ mmiri atọ (otu okenye naanị), na mgbazinye ọrụ mmiri dịkwa maka ndị ọbịa.
4. Ugbo anumanu Triple Creek - Darby, Montana
Triple Creek Ranch, nke dị na Darby, Montana, na nnukwu ugwu Bitterroot dị na Montana Rockies gbara ya gburugburu, bụ otu n'ime ebe ntụrụndụ kacha mma n'ụwa.
Ọ bụ ezumike ọzara nke gụnyere mkpokọta abalị na ụlọ osisi osisi na ụlọ anụ ụlọ. Ime ụlọ niile gụnyere ebe a na-ere nkụ na ịnweta ọkụ na-ekpo ọkụ ebe ị nwere ike zuru ike na kpakpando.
Ịgba ịnyịnya, ịnya ịnyịnya, ịgba golf, na sledding nkịta bụ naanị ọrụ ole na ole a na -eme n'ime afọ. A na -etinyekwa nri gourmet ndị eji ihe ọhụrụ, nke mpaghara eme.
N'ime obodo mmụọ mmụọ echekwara echekwara na narị afọ nke 19 nwere isi iyi ọkụ ịnweta ya, Dunton Hot Springs na-anya ọmarịcha ọzara na ugwu San Juan dị ka ebe ndabere.
Ebe a na-eme kpakpando ise bụ ebe kachasị mma iji pụọ na ya niile wee jikọta ya na nke masịrị gị.
E megharịrị mgbanaka nke ụlọ osisi ihe ochie ka ọ bụrụ ọmarịcha njem nwere ihe ndị dị ka spa dị egwu, ọbá akwụkwọ nwere nnukwu nri, na ụlọ mmanya.
A na-akpọkarị Hana-Maui Resort, nke na-eleghara Hana Bay anya n'akụkụ dịpụrụ adịpụ nke ụsọ mmiri Maui, dị ka otu n'ime ebe ntụrụndụ ihunanya kachasị n'ụwa.
Na -atụ anya ọrụ pụrụ iche, a spa klaasị ụwa, nri mara mma, yana ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Na -enweghị telivishọn ma ọ bụ elekere mkpu, ime ụlọ ndị ahụ buru oke ibu ma hazie ha ka ha na -enye udo zuru oke.
Jiri ụgbọ mmiri ma ọ bụ ụgbọ mmiri rute na Little Palm Island Resort & Spa maka ezumike ịhụnanya nke ndị hụrụ n'anya, zuru ike n'ụgbọ mmiri ma ọ bụ jiri mkpagharị n'akụkụ osimiri aja ọcha.
Enwere ọtụtụ ihe oriri na-atọ ụtọ, mana enweghị igwe onyonyo, elekere mkpu, ma ọ bụ ekwentị, naanị okporo ụzọ bụ iguanas na-awagharị n'okporo ụzọ mbadamba nkume.
Ọ nwere Champagne jụrụ oyi na -eche gị mgbe ị bịarutere, yana ọmarịcha coral reefs na -aga ebe dị anya maka igwu mmiri n'ime mmiri dị egwu nke nwere azụ azụ.
Enchantment Resort dị mma maka ndị di na nwunye na-achọ ezumike izu ike, nke na-ebelata nchekasị nke nwekwara ike melite ahụike ha n'ozuzu ya.
Boynton Canyon, nke ejiri mara ya na -enweta ume dị mma maka ịgwọ ọrịa, gbara okwute na -acha ọbara ọbara pụrụ iche nke Sedona gbara ya gburugburu.
Ọ nwekwara ụlọ Mii Amo, spa ama ama n'ụwa niile nke na-enye ndị ahịa uru pụrụ iche dịka ọgwụgwọ sitere n'ike mmụọ nsọ nke amamihe na omenala ndị Amerịka.
Okpokoro nkeonwe, nlele dị egwu, na ebe a na-amụnye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ, ha niile dị n'ime ụlọ na ime ụlọ, nke a na-ebi n'ime ụlọ nwere ụdị pueblo.
Ịgba ịnyịnya ibu, ịga ije, igwu mmiri, golf, ebe a na -esi nri, yoga, ntụgharị uche, na mmemme ndị ọzọ dị.
9. Ụlọ nkwogwu - Cape Neddick, Maine
Ụlọ Cliff bụ ebe a ma ama Maine na-adọta ndị di na nwunye na-achọ ịhụnanya. Ọ na -anabata ndị ọbịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 150 wee gafere n'akụkụ Oké Osimiri Atlantik, na -enye echiche oke osimiri na spa na ọgwụgwọ ịhịa aka n'ahụ.
Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ whereụ ebe ị nwere ike ịlele ọmarịcha mpaghara ahụ, azu ohuru, yana ụdị ntụrụndụ dị iche iche dịka ịkwọ ụgbọ mmiri.
Ọdọ mmiri atọ, labyrinth ntụgharị uche n'èzí, mmemme mgbatị ahụ, na naanị ndị okenye nwere ebe mgbaba gas na mbara ihu nkeonwe so na ihe eji enyere ndụ aka.
10. Ogige ahịhịa ahịhịa ahịhịa - Saratoga, Wyoming
Ogige ahịhịa ahịhịa ahịhịa ọ dị mma maka njem ịhụnanya maka mmadụ abụọ. Kporie ịhụnanya ihunanya nke Wild West na ọtụtụ ihe omume kwa afọ na ọmarịcha ebe ana-eri nri ndị ọbịa anyị.
Ịgba ọsọ, ịkwọ ụgbọ mmiri, ịgba ịkwọ ụgbọ mmiri, na ịkwọ ụgbọ mmiri bụcha ihe n'oge oyi.
N'ime ọnwa na -ekpo ọkụ, were ịnyịnya mee njem n'okporo ụzọ dị kilomita iri ise, mụta ife efe azụ, na -eme yoga, wee jiri ọgwụgwọ spa nọrọ jụụ.
Agụnyere ya bụ nri dị egwu. Ị ga -enwe ike ịgbazite ihe niile ma ọ bụ otu n'ime ọmarịcha ụlọ ma ọ bụrụ na ị “gbazite ụlọ.”
10 Ebe ntụrụndụ ski kacha mma na US
1. Ebe ezumike Stowe Mountain: Stowe, Vermont
Ebe ezumike Stowe Mountain n'ebe ugwu Vermont bụ nrọ onye na -anya ụgbọ mmiri, nwere acres 485, ụzọ 116, na mbuli elu 12 na -anabata ndị njem na -anụ ọkụ n'obi na nnọkọ ahụ.
Ugwu Mansfield na Spruce Peak, nke gondola na -ejikọ ngwa ngwa, bụ akụkụ nke ebe a na -eme njem. Ebe a na -eme njem na -agụnye ezigbo ngwakọta nke ndị mbido na ụzọ dị elu, agbanyeghị, ebumnuche ya bụ maka ndị na -agba ski n'etiti.
Ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ọkachamara nwere ike nwalee nka ha n'ọtụtụ ọgba, jumps, na rails nke ogige ahụ. Ọ bụrụ na ịchọghị ịgbada mkpọda ugwu, ebe a na-enye skiing obodo. The Lodge na Spruce Peak bụ ebe ịnọ ma ọ bụrụ na ị na -eme ski na Stowe Mountain Resort.
Ebe ezumike bụ naanị ebe ezumike okomoko dị na Stowe nke na-enye ohere ịbanye, ịpụ apụ, ọ na-enye ohere ịnweta ụzọ niile. Gbasaa na spa saịtị mgbe ogologo ụbọchị gachara n'ugwu.
Mgbe ahụ, n'otu n'ime ụlọ ndị ama ama, nnukwu ọnụ ụlọ, ma ọ bụ ụlọ ezumike, zuru ike maka ihe omume n'echi ya; ị nwekwara ike idobe ụlọ mgbazinye okomoko nke nwere onye osi nri nkeonwe yana ọrụ onye na -egbu mmanya.
2. Ebe ezumike Killington: Killington, Vermont
Killington Ski Resort nwere ihe karịrị ụzọ 200 gbasaa gafee ọnụ ugwu asaa na etiti Vermont, yabụ ị nwere ike ịgba ski ruo ụbọchị ma ike agaghị agwụ gị. Ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụzọ na -eme ka ndị na -anya ụgbọ mmiri na ndị na -ahụ snow na -ahụ ike niile chọta ihe masịrị ha.
N'aka nke ọzọ, ugwu ahụ na -enye ndị na -agba ski n'etiti na ndị nwere ahụmahụ karịa ndị mbido. Nkọwa Ekwensu, Oke Mpụga, na Cascade bụ oke ịgba ọsọ ga -ahapụ gị ka ikuku na -eku ume.
Na mgbakwunye, ogige ntụrụndụ a na -enye ebe a na -enye ohere zuru oke maka ịme egwuregwu aghụghọ na aghụghọ. Ụlọ oriri na ọillingụ Kụ Killington Grand Resort bụ ebe dị mma ịnọ ebe ọ na-enye gị ohere ịwụpụ na ịpụ ugwu site na akwa mmiri kpuchiri elu snow.
Ndị ọbịa gara aga toro ọdọ mmiri a na -ekpo ọkụ, ebe ịsa ahụ ọkụ, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, ụlọ egwuregwu, na klọb ahụike. N'ịgaghị ekwu okwu, nleta na Killington Grand Spa mgbe otu ụbọchị gasịrị na mkpọda ugwu bụ ụzọ dị mma iji mee ka ahụ ike siri ike.
3. Osisi Bretton: Bretton Woods, New Hampshire
Bretton Woods bụ nnukwu ogige ntụrụndụ New Hampshire, yana ọtụtụ ọrụ iji mee ka ezumike ski gị gaa nke ọma. Ebe a na -eme njem nwere ebe mbuli elu iri na -enye ụzọ 98 na ọ gladụ, yana ihe karịrị sentimita 200 nke snow na -ada kwa afọ.
Gbanyụọ mkpọda ugwu, a ga -enwekwa ọ beụ ụtọ nke ukwuu. Ugwu ski ma ọ bụ ịgba mmiri snow bụ ihe omume oyi abụọ na -esiri ike.
Ka ọ dị ugbu a, ebe ịsa ọkpọ, ogige ụmụaka na -agba snow, na njem igwe kwụ otu ebe oyi na -enye ọbụna ntụrụndụ ezinụlọ karịa.
4. Sugarloaf: Ndagwurugwu Carrabassett, Maine
Sugarloaf bụ otu n'ime ogige ntụrụndụ kacha elu nke New England, yana 1,240 acres nke ebe a na-amị amịpụta na mgbada kwụ ọtọ 2,820-ụkwụ. Ụzọ ụkwụ 162 na ọ gladụ na-akwado ọkwa niile nke ndị na-anya ụgbọ mmiri, na-agba ọsọ site na mfe ruo ọkachamara.
Na mgbakwunye, site na mbuli elu ski 13, ị ga -enwe ike itinyekwu oge ịgba ọsọ kama ichere n'ahịrị maka ịnya n'elu. Otú ọ dị, ihe omume ndị na -akpali akpali akwụsịghị n'ebe ahụ.
Ịgba ọsọ obodo, ịgba nkịta, ịnya igwe na-agba n'elu snow, na ịkwọ ụgbọ mmiri bụ nhọrọ niile maka ndị ọbịa na Sugarloaf.
Enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ shopsụ andụ na ụlọ ahịa dị n'okpuru ugwu iji mee gị obi ụtọ.
Ndị ọbịa gara aga na-atụ aro ka ị kwụsị site na 45 North maka nri tupu ha aga na Sugarloaf Mountain Hotel, nke nwere nnukwu ebe a na-ekpo ọkụ n'èzí, ebe a na-eri nri ebe a na-eme njem, ebe mgbagharị ebe a na-eme ski, na nlele ugwu dị egwu.
5. Ugwu Crystal: Thompsonville, Michigan
Ebe a na -eme ski ski Midwest, nke dị kilomita iri atọ na ndịda ọdịda anyanwụ nke Traverse City, na -enweta ụkwụ 30 nke snow kwa afọ, na -achọpụta ọnọdụ dị mma.
Ndị na -eme ski nwere ike ịnweta ụzọ 58 site na nhọrọ mbuli elu asatọ, nke ụfọdụ n'ime ha na -enwu maka sọọsọ abalị. Ihe dị ka ọkara nke ụzọ ahụ dabara maka ndị na -agba ski n'etiti, ebe 22% bụ maka ndị mbido na 30% bụ maka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri nwere ahụmịhe.
Ramps, ọkara paipu, jumps na atụmatụ ndị ọzọ dị na mpaghara ogige atọ. Maka ndị chọrọ ịnọrọ na mbara ala dị larịị, ịgba ski gafee obodo bụ nhọrọ.
Ndị ọbịa ga -ahụ ebe a na -egwu ụgbọ mmiri, ebe a na -ekpo ọkụ n'èzí, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa pro, ụlọ oriri na ọ, ụ, ụ, na ọtụtụ nhọrọ ụlọ oriri na ọ atụ atụ n'ụkwụ ugwu ahụ.
Ọ bụrụ na ị na -aga nnukwu oriri, nọrọ na Bungalows na Crystal Den, Inn na Mountain ma ọ bụrụ na ịchọrọ ijikọ ọrụ na egwu, ma ọ bụ The Hamlet maka ụlọ ndị ọbịa mara mma.
6. Ebe nkiri Whiteface Mountain: Wilmington, New York
Ọ bụghị naanị na ị ga -ahụ ugwu ski na -adigide na Whiteface Mountain Resort, mana ị ga -ahụkwa mgbada kwụ ọtọ kachasị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Rockies.
Otu n'ime usoro mmụta kacha ogologo na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ, yana “slides,” nke bụ nke dị oke elu, dị ka mmiri na-agbada nwere ihe isi ike diamond abụọ, so na njirimara pụrụ iche nke ebe a.
Ndị na -eme ski nwekwara ike gaa n'ogige ntụrụndụ maka ịgba ọsọ adrenaline nke na -adịchaghị egwu. Ọbụlagodi na ị bịarutere Whiteface dị ka onye na -atụ ụjọ na -atụ ụjọ, otu n'ime ọtụtụ nkuzi onwe ma ọ bụ otu dị nwere ike inyere gị aka inwe ntụkwasị obi n'okporo ụzọ ahụ.
Mgbe ịchisịrị nkịkasị, wepụta oge iji kirie nlegharị anya Olympic n'ugwu a, nke nabatara asọmpi Olympic nke 1980.
Mgbe ahụ, maka ọnọdụ enyi na enyi nwere atụmatụ dị ka ọdọ mmiri ime ụlọ na ebe a na-eme ice, nọrọ na The Golden Arrow Lakeside Resort ma ọ bụ Hotel North Woods, ha abụọ dị nso na ogbe ndịda Lake Placid.
Oge oyi na ndịda abụghị ebe egwuregwu ski, yana nke Virginia Ebe ezumike Wintergreen bụ otu n'ime ndị kachasị. Igwe mbuli elu abụọ nke ụlọ oriri na ọ provideụ provideụ a na -enye ohere ụzọ 26 nke ọkwa ihe isi ike dị iche iche.
Enwere mkpọda dị n'etiti ebe ị nwere ike ịse ihe nkiri, yana egwu ndị ọkachamara siri ike nke na -eburu ndị na -anya ụgbọ elu ruo n'okpuru ugwu.
Ogige Ntụrụndụ Ridgely, ngalaba ụmụaka a kapịrị ọnụ, na ebe a na -adọba ahịhịa maka ime egwuregwu skai na -agbagharị onyinye ugwu ahụ. Na Wintergreen, ndị ọbịa nwekwara ike debanye aha maka nkuzi ski ma ọ bụ nkeonwe.
Ebe ntụrụndụ a na -emejupụta enweghị oke n'ihe gbasara ọrụ ma e jiri ya tụnyere nha anya ọdịda anyanwụ ya. Mgbe ị jisiri ike na -eme ski, nwalee nnukwu ogige tubing nke steeti, mikpuo n'ime ọdọ mmiri ime ụlọ ezumike, ma ọ bụ mee onwe gị mma na Wintergreen Spa.
Ebe a na -eme njem ahụ na -enye ụzọ dị iche iche ị ga -esi nọrọ, site na ime ụlọ nkwari akụ ọdịnala dị na Mountain Inn ruo ohere ụlọ na ohere ịgbazinye ụlọ.
Ị ga -enwe echiche maka Ugwu Blue Ridge n'agbanyeghị ụdị ebe obibi ị họọrọ.
8. Timberline Ebe Atụrụ anọ: Davis, West Virginia
The Timberline Four Seasons Resort na-enye ụzọ dị iche iche, site na ụzọ enyi na enyi na-amalite ruo agba diamond ojii okpukpu abụọ.
Ụzọ Twister dị n'etiti na-enye ohere ka ndị ọkwọ ụgbọ mmiri megharịa ntụgharị ha, ebe ụzọ Salamander nwere enyi na enyi na-enye ndị mbido ohere ịrịdata site n'ugwu.
Na mgbakwunye, ogige ntụrụndụ abụọ na -enye ohere zuru oke maka ndị na -anya ụgbọ mmiri na ndị na -ahụ snow na -eme ihe omume na aghụghọ. Obere mkpọtụ na igbe igbe dị na Snow Squall Terrain Park maka ndị chọrọ ịdị mfe ịbanye na stunts freestyle na ihe ndị yiri ya.
Mgbe ị dị njikere, gaa na Thunder Snow Terrain Park maka atụmatụ na okporo ụzọ ndị siri ike karị. Ị nwere ike ịdebanye aha ka gị na onye nkuzi ọkachamara wee rụọ ọrụ n'otu n'otu ma ọ bụ họrọ maka nkuzi otu, ma ọ bụ oge izizi gị na mkpọda ma ọ bụ na ịchọrọ naanị ụfọdụ ntụnye iji meziwanye ọsọ gị.
Nnukwu ebe obibi nwere nhọrọ nri na ihe ọ varietyụ beụ dị iche iche iji mejuo agụụ ị na-eme ski, mana ndị ọbịa na-enwekwa mmasị ịga leta ụlọ oriri na ọ footụ atụ n'ụkwụ ugwu ahụ.
Ụlọ nkwari akụ Timberline na-enye ohere dị mma maka ịgba ski/ịpụ na ebe a na-eme njem, ebe motel ndị ọzọ na nri ụra na nri ụtụtụ dị nso dịkwa nso n'ugwu ahụ.
9. Ebe ugwu Crystal Mountain: Pierce County, Washington
Ebe ezumike a, nke dị na mpụga Ugwu Rainier National Park, bụ ebe ọzọ na -eme ski nke Washington. Ndị ọbịa nwere ike ịnweta ụzọ 57 enyere ikike site na mbuli iri na otu, ebe ihe karịrị ọkara n'ime ha na-agba ọsọ n'etiti.
A na -ekewa ndị nke ọzọ na mkpọda ndị mbido na ndị ọkachamara, nke na -enweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ sentimita 500 nke snow kwa afọ. Ihe dị ka mita 7,000 karịa oke osimiri, ụlọ oriri na ọ Sumụ Sumụ na -enye ndị ọkwọ ụgbọ mmiri agụụ nri nri mara mma.
Campbell Basin Lodge na-enye ego n'etiti ugwu, yana ọtụtụ ụzọ nri ọzọ dị n'akụkụ ntọala ahụ.
Alpine Inn, The Village Inn, na Quicksilver Lodge bụ ụzọ atọ dị mma iji nọrọ na ntọala maka ndị njem ike gwụrụ.
Ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ ndị a dịgasị iche iche, mana ha niile na-enye akụrụngwa dị mma dị ka Wi-Fi efu na nnweta ịnya ụgbọ elu. Ndị Crystal Mountain Resort dị ihe dị ka kilomita 80 na ndịda ọwụwa anyanwụ Seattle.
Ọ bụrụ na ị ruo Breckenridge, ị bịarutelarị n'otu n'ime ebe a na -eme ski nke ọma na mba ahụ, ihe eji enyere ndụ aka na Breckenridge Ski Resort ga -enyere gị aka iji oge gị niile mee ihe.
Nnukwu ebe a na -eme ski (ihe dị ka 60 kilomita ndịda ọdịda anyanwụ nke Denver) bụ maze nke a ga -achọ inyocha: elu ugwu ahụ rịrị elu 12,998 ụkwụ, enwere ụzọ 187 nke 34 na -ebuli elu ski na -eje.
Ị nwere ike rụọ ọrụ na nka gị n'otu ogige ntụrụndụ ma ọ bụ nwalee aka gị n'okporo ụzọ elu ugwu dị elu nke pụrụ iche na mpaghara a. Ọ bụ oge ịkụ obodo mgbe ị richara nri na mkpọda ugwu.
Boutiques, ụlọ oriri na ọ museụ ,ụ, ebe ngosi ihe mgbe ochie, na ebe a na -ere mmanya juru eju na mpaghara ime obodo ochie, na -agbanwe njem skai gị ka ọ bụrụ ahụmịhe ọdịnala zuru oke.
Ndị ọkwọ ụgbọ mmiri ike gwụrụ nwere ike ịdọrọ isi ha n'otu ụlọ nkwari akụ flagship, dị ka Crystal Peak Lodge na One Ski Hill Place. Ski valet, tiketi na-ebuli ụlọ, yana ọmarịcha ọnọdụ nwere ohere ịbanye n'ugwu ahụ niile gụnyere ọnụnọ n'ụlọ nkwari akụ ama ama.
Anyị nwere olile anya na ị hụrụ akụkọ a n'anya na ebe ntụrụndụ dị nso na ọ baara gị ezigbo uru.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ aro gbasara ebe ntụrụndụ ndị ọzọ dị gị nso, biko mee nke ọma ịhapụ ikwu okwu yana kwa, kesaa ndị enyi gị akụkọ a.
Tags:ụlọ ezumike osimiri niile na florida, ụlọ ezumike osimiri niile na usa, ụlọ nkwari akụ niile na usa, ụlọ oriri na ọlusiveụlusiveụ niile dị na usa maka ndị di na nwunye, ụlọ ntụrụndụ niile yana m nso, ụlọ nkwari akụ kacha mma, ụlọ ezumike kacha mma na usa maka ndị di na nwunye, ụlọ ezumike kacha mma na usa
Balance Kaadị Indiana EBT: Nzọụkwụ iji hụ Balance Kaadị Indiana EBT gị
Koodu Mpaghara New York zuru ezu ma zuo oke
Ebe nlegharị anya kacha mma ị ga -eleta mgbe agbamakwụkwọ gị gachara na USA